Fatịlaịza | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Akụkụ nke ịme compost na-eme ya n'onwe gị
Ndị ọrụ ugbo na ndị na-elekọta ubi na-achọkarị ụzọ isi mee ka owuwe ihe ubi ahụ dịkwuo mkpa, n'ihi na iji nri fatịlaịza dị oke ọnụ ma sie ike ịchọta. Nri mmanu mere ka ha dị ọnụ ala, ha na-enye mkpụrụ dị elu, ma mgbe oge ụfọdụ, ndị nwe nkata ahụ na-achọpụta na ala dị njọ: ọ na-aghọ ìhè, siri ike, ájá, ọ dịghịkwa erikọ ọnụ.
Anyị na-akụ ma na-elekọta cactus n'ụzọ ziri ezi
Cacti na-aghọwanye ihe na-ewu ewu maka ịmalite n'ụlọ. Osisi ahụ adịghị mma na nlekọta ma na-eguzogide mmiri ozuzo, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchefu ịṅụ mmiri, cactus ahụ agaghị enwe ahụ iru ala. Otu esi achọ cactus E nwere ọtụtụ n'ime ndị na-eto eto na ndị kachasị mmasị maka ọnọdụ ụlọ.
Uru nke iji mkpụrụ osisi bud stimulator "Ovary"
Ajụjụ banyere otu esi eme ka mkpụrụ nke ubi na-eto eto nọgidere na-aba uru na oge a. Ọ dị mkpa karịsịa maka ndị nọ n'oge okpomọkụ bụ ndị na-enweghị ike ịnya isi maka ọmụmụ nke ala na ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke pollinators. Ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-ekwu okwu banyere ọgwụ ọjọọ nke nwere ike ịme ka e guzobe ovary ahụ ma mụbaa mkpụrụ, ya bụ, Universal Ovary na ntụziaka maka iji ya.
A na-eji superphosphate mee ihe n'ugbo
Onye ọ bụla na-etolite na osisi maara na na-enweghị uwe, ọ gaghị enwe ihe ubi, ihe oriri ọ bụla, ma ọ bụ ihe ubi. Osisi anaghị enweta nri zuru oke n'ala, na mgbakwunye, ọ bụghị ala niile dị mma, ya mere na enyemaka nke fatịlaịza dị mkpa ka e nyere gị aka. N'isiokwu a, anyị ga-atụle banyere superphosphate, ngwa ya na ihe onwunwe ya.
N'iji potassium nitrate n'ime ubi na n'ogige
Osisi, karia ndi bi na ala dara ogbenye, choro ihe oriri ka ha wee na eto ma na-etolite. Nri nri akuku na-enyere aka aka ichikota ihe ndi ozo na nkuchi oyi; Otu n'ime ihe ndị a ịnweta nri bụ potassium nitrate.
Esila humus, ihe bara uru nke humus maka ala
Onye ọ bụla na-elekọta ubi na onye na-elekọta ubi maara ihe humus dị ala, ọ dị ezigbo mkpa maka mkpụrụ dị elu na ahịhịa ọkụ na ubi. Ọbụna ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ nke aka ya. Otú ọ dị, mmalite nke ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi adịghị aghọta mgbe niile ihe a na-ekwu, ihe kpatara akụkụ a nke ala, ihe ọ na-emetụta nakwa ebe ọ ga-esi nweta ya.
Ntuziaka maka ojiji nke mmiri mmiri
Ezigbo owuwe ihe ubi na mmepe nke ọma nke ubi na ubi a na-akọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ha anaghị azụ nri. Ọzọkwa, ọ dị mkpa ịmalite usoro a ogologo oge tupu akuku (na ogbo nke ịgha mkpụrụ) wee gaa n'ihu n'ihu. Dị ka ị maara, nri dị na ịnweta ma ọ bụ organic, ụdị abụọ a dị oke mkpa maka osisi.
Technology nke ngwa nke organic fatịlaịza "Signor Tomato"
Organic fatịlaịza "Signor Tomato" guzosiri ike BIO VITA na-etinye dị ka ezigbo nri maka tomato na-ede ede. Tụlee ihe mejupụtara, uru nke iji na usoro nke ime ọgwụ a. Ngwakọta, ihe na-arụsi ọrụ ike ma hapụ ụdị "Tomato Signor" - organic fatịlaịza, nke nwere ọtụtụ chemicals: Nitrogen, potassium na phosphorus na 1: 4: 2.
Atụmatụ na uru nke fatịlaịza osisi "Kemira" ("Fertika")
Kemira bụ ihe mgbakwunye ịnweta ịnweta ihe mgbagwoju nke micro na macronutrients maka ụfọdụ ụdị osisi. Ogologo ngwa a di uba: eji ya eme ihe n'ubi, ogige na oru ugbo. General Description Fatịlaịza "Kemira" ("Fertika") na-ewetara ya n'ụdị mmeju ịnweta ịnweta.
Ojiji nke fatịlaịza nitrophoska maka mkpụrụ dị iche iche
Nitrophoska - nke dị na nitrogen-phosphorus-potassium fatịlaịza, nke a na-eji eme ka mkpụrụ nke ubi na ubi nile kụrụ. Taa, anyị ga-atụle njirimara nke nitrophosphate na ihe onwunwe ya, deekwa ọnụego ngwa ngwa maka osisi dị iche iche. Ngwongwo mepụtara na mpempe akwụkwọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ na nitrophosphate fatịlaịza nwere isi ihe atọ dị na ya: nitrogen - 11%; phosphorus - 10%; potassium - 11%.
N'iji potassium chloride fatịlaịza n'ogige
Maka usoro mmepe nke osisi ọ bụla, atọ nri dị mkpa: nitrogen, phosphorus na potassium. Nitrogen na-enye aka n'uto ha na ịmị mkpụrụ, site na-eme ka mmepe ahụ dịkwuo elu, potassium na-enyekwa aka ubi a kụrụ iji merie nchekasị n'ụdị ọnọdụ ọjọọ, iji nagide ọrịa, iji weta mkpụrụ osisi dị elu na ogologo oge.
N'iji calcium nitrate dịka fatịlaịza
A na-ejikarị nitrate calcium na-arụ ọrụ n'ugbo dị ka uwe elu osisi, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi a kụrụ. N'isiokwu a, anyị ga-atụle àgwà bara uru nke calcium nitrate, yana tụlee ntụziaka dị mkpirikpi banyere ojiji ya. Calcium nitrate: ihe mejupụtara nke fatịlaịza Ihe mejupụtara fatịlaịza bụ calcium, nke na-ewe ihe dị ka pasent 19 nke ngụkọta ihe niile.
Kedu esi etinye fatịlaịza "Gumat 7"?
Onye ọ bụla na-elekọta ubi na-achọ inweta ezigbo owuwe ihe ubi site na akwa ha, ọ dịghịkwa mkpa, nke a bụ obere ebe a na-akpọcha, na poteto na cucumbers kụrụ ya, ma ọ bụ nnukwu ubi ugbo. Ebe ọ bụ na ala akarịala oge, ọ gaghị ekwe omume na-eto eto na-edozi ahụ n'enweghị uwe elu. Ọ bụ maka nzube a ka ụkọ anụ ahụ "Gumat + 7 Iodine" na-eje ozi.
Umu umu ahihia kachasi
Ogige begonia - ịma mma
Na-eche maka elutykau obi
Nri garlic nri: ntụziaka, oyi kpọnwụrụ, e ghere eghe
Unreliorel sọrel. Kedu ihe osisi ji aga akụ?